खुसीको खबर : पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ७ जनाले कोरोनालाई जितेर फर्किए घर – नेपाली संगसार
खुसीको खबर : पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ७ जनाले कोरोनालाई जितेर फर्किए घर
नेपाली संगसार calendar_today २३ बैशाख २०७८, 12:26 pm
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ५४ जनाको मृत्यु मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार विभिन्‍न जिल्लामा गरी ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । हालसम्म मृतकको संख्या ३ हजार ५ सय २९ पुगेको छ ।
यस्तै सोही अवधिमा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको २० हजार ३ सय ६७ पीसीआर परीक्षणबाट ८ हजार ९ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
एन्टिजेन विधिबाट गरिएको ७ सय ७५ परीक्षणबाट १ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ६८ हजार ५ सय ८० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ७ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन वा निषेधाज्ञा गलत नभएको बताएका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.समीरमणि दीक्षितले लकडाउन वा निषेधाज्ञाा आफैँमा गलत नभएको बताएका हुन् । उनले निषेधाज्ञाले केही हदसम्म सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको र यो तथ्यलाई हामीले नकार्न नसकिने बताए।
उनले निषेधाज्ञा कसरी गर्ने, टाइमलाइन कस्तो हुनुपर्ने र एक पटक निषेधाज्ञाको नोटिस जारी गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्था अप्ठ्यारो नै छ, धेरै मानिसको मृत्यु भएको हुनाले सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने शङ्का र डर देखिएको हुनाले सरकारले लगाएको निषेधाज्ञालाई गलत भन्न मिल्दैन । तरिका फरक हुन सक्छ , तर गलत होइन,’ उनले भने ।
लकडाउन हुनु अगाडि १५ सय दुई हजार सङ्क्रमित थपिन्थ्यो भने अहिले सात हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिँदै छन्, यसको मुख्य कारण के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले सङ्क्रमणलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने, यो एक–दुई दिनमा नियन्त्रण हुने कुरा होइन् ।
यसमा एक–दुई महिनाको कुरा हुन्छ । तपाईंले आज नियन्त्रणको बाटो शुरु गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि एक महिनापछि मात्र यसको नतिजा वा प्रतिफल हेर्न पाइने बताए ।
त्यसो त पछिल्लो समय कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्ति पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट सङ्क्रमित भएका छन् । यसको मतलब कोरोना खोप प्रभावकारी हुन नसकेको हो ? भनने जिज्ञासामा विज्ञले सबैभन्दा पहिला खोप लगाएको कति समय भयो र त्यसमध्ये कति जना सङ्क्रमित हुुनुभयो र उनलाई के समस्या देखियो त्यो हेर्नुपर्ने बताए ।
‘पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाएकाले एक वा दुई हप्ता बिताएको पहिला हेर्नुपर्छ । र तीमध्ये कति जना सङ्क्रमित हुनुभयो र सङ्क्रमित भएकाहरुलाई के भयो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो यो,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ दीक्षित भन्छन्, ‘किन भने खोपले सङ्क्रमित रोक्ने होइन । खोपले सङ्क्रमित भइहाल्यो भने कडा रोग लाग्न र मृत्यु हुनबाट बचाउने हो । संसारभरिको तथ्याङ्कले त्यही देखारहेको छ, र खोपको काम पनि यही हो ।’
त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका मध्ये जो–जो सङ्क्रमित हुनुभयो उहाँहरुलाई कडा रोग लाग्यो कि लागेन र लागेन भन्ने जवाफ आउँछ भने खोप लगाएका व्यक्तिमा सङ्क्रमित भए पनि त्यसले भयावह वा अप्ठ्यरो रुप धारण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।